စတမ်းဖို့ဘရစ်ချ် ကို ပြန်လာနိုင်ဖို့ ဘယ်လ်ဂျီယံ မှာ ဆေးစစ်မှုတွေ ခံယူတော့မယ့် လူကာကူ - SPORTS MYANMAR
စတမ်းဖို့ဘရစ်ချ် ကို ပြန်လာနိုင်ဖို့ ဘယ်လ်ဂျီယံ မှာ ဆေးစစ်မှုတွေ ခံယူတော့မယ့် လူကာကူ
အင်တာ မီလန် တိုက်စစ်မှုး လူကာကူ ဟာ အသင်းဟောင်း ချဲဆီး ကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ အတွက် အပြောင်းအရွှေ့ ဆိုင်ရာ ဆေးစစ်မှုတွေ ကို ဘယ်လ်ဂျီယံ မှာ လုပ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ကလပ် အသင်းနှစ်ခု အကြား ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပမာဏ ယူရို 115 သန်း (ပေါင် 97.5 သန်း) နဲ့ သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ မည်သည့် ကစားသမားမျှ အလိုက်ပေးခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး။
အသက် 28 နှစ်အရွယ် တိုက်စစ်မှုးဟာ ဆေးစစ်မှုတွေ ခံယူပြီးပြီ ဆိုတာ နဲ့ နောက် 48 နာရီ အတွင်း လန်ဒန် ကို ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ ချဲဆီး နဲ့5နှစ် စာချုပ် သက်တမ်းရှိတဲ့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှာ ဖြစ်ကာ ၊ တနှစ် လုပ်ခ ယူရို 12 သန်း ကျော် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (အခွန်ဆောင်ပြီး တပတ် လုပ်ခ ပေါင် 195000 ခန့်) ။ အဲဒီ ပမာဏကြောင့် လူကာကူဟာ ချဲဆီး ရဲ့ လစာ ဝင်ငွေ အများဆုံး ကစားသမား အဖြစ် ရပ်တည်သွားမှာပါ။
အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စတွေ ကို သောကြာနေ့ က အရှိန်ဟုန် မြှင့်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ကာ ချဲဆီး က ကုန်ကျစာရိတ် လျှော့ချနိုင်ဖို့ ၊ ကစားသမား အလိုက်ပေး ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အင်တာ မီလန် ကလဲ ငွေသား သပ်သပ်ချည်းသာ လိုချင်ကြောင်း ပြောဆိုရင်း အပြီးသတ် သဘောတူညီမှု ကို ရအောင် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။
ချဲဆီး ကလဲ ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီ အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ ပါဝင် ကစားခွင့် ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် တနင်္ဂနွေနေ့ နောက်ဆုံးထားကာ အပြီးသတ် ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားခဲ့တာကြောင့် အခုလို အချိန်တိုအတွင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတွေ အရတော့ လူကာကူ ရဲ့ အပြောင်းအရွှ့ ကနေ အသင်းဟောင်း ယူနိုက်တက် ကလဲ ယူရို4သန်း ခန့် ရရှိသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ 2019 ခုနှစ်က လူကာကူ ကို အင်တာ မီလန်ဆီ ရောင်းချလိုက်စဉ်က ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Sell-On Clause ကြောင့်ဖြစ်ကာ ၊ ရရှိလာတဲ့ အမြတ် ပမာဏ အပေါ် မူတည်ပြီး တွက်ချက် ပေးချေလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကာကူ ဟာ ဘာကြောင့် ချဲဆီးထံ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒရှိလာခဲ့တာလဲ?
တကယ်တော့ ဘယ်လ်ဂျီယံ တိုက်စစ်မှုးကြီးဟာ အင်တာမီလန် မှာ ကစားပေးနေရတာ ပျော်ပါတယ်။ အီတလီ က ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း ကလဲ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာထက် ပိုပြီး သူ့ကို တန်ဖိုးထားတယ်လို့ ခံယူထားသူပါ။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံတွေကို ဆွဲထုတ်ပြသွားတဲ့ နည်းပြ ကွန်တီ ထွက်ခွာသွားတာတောင် ၊ အသင်းမှာ ဆက်ကစားပေးဖို့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကိုသာ ပြန်လည် အခြေချရမယ် ဆိုရင်လု သူ့ရဲ့ အတွေးမှာ အဲဒီနေရာ က ချဲဆီးကလွဲပြီး အခြားအသင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အန်ဒါးလက်ချ် ကနေ ပေါင် 18 သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပေမယ့် ၊ 2011 ကနေ 2014 ခုနှစ် အတွင်း ချဲဆီး အတွက် စုစုပေါင်း 15 ပွဲသာ ပါဝင် ကစားခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတွေးမှာ အိုင်ဒေါ တိုက်စစ်မှုးကြီး ဒရော့ဘာ ရဲ့ လမ်းစဉ် အတိုင်း ချဲဆီးမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရှာဖွေဖို့ အိပ်မက်တွေ အကြီးကြီး မက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကာကူ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ချက်ခြင်း အထိုင်ကျသွားမယ် ဆိုတာတော့ သံသယ ဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ အင်တာ မီလန်ဆီ မပြောင်းရွှေ့မှီ စုစုပေါင်း 252 ပွဲ အထိ ကစားခဲ့ကာ ၊ 113 ဂိုး အထိ သွင်းယူထားတဲ့ မှတ်တမ်းက သူ့ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် စွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်လောက်အထိ ကောင်းမွန်လဲ ဆိုတာ ဖော်ညွှန်းလျှက် ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူဟာ ချဲဆီး ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း နဲ့လဲ ရင်းနှီးထားပြီးသားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာ မီလန် ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ဗျူဟာ က ဘယ်လိုလဲ?
အင်တာ မီလန် ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ညာနောက်ခံလူ တွေထဲက တယောက် ဖြစ်တဲ့ အာခက် ဟာခီးမီး ကို ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းထံ ယူရို သန်း 60 နဲ့ ရောင်းချခဲ့သည့်တိုင်အောင် ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းက ပြေလည်သွားခြင်း မရှိပါဘူး။
Oaktree Capital Management က ယူရို 275 သန်း ထည့်ဝင် ရင်းနှီး မြုပ်နှံဖို့ သဘောတူခဲ့ပေမယ့် ၊ အဲဒီ ပမာဏ ရဲ့ ၅ ပုံ ၁ ပုံပဲ ဒီရာသီမှာ ပေါင်းထည့်ခွင့် ရတာကြောင့် နောက်ထပ် ငွေကြေး ဖော်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းထောက် တချို့ ရဲ့ ဖော်ပြချက်မှာ အသင်း ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ကို ဖြေရှင်း နိုင်ဖို့ အတွက် လစာပေးချေမှု စုစုပေါင်း ပမာဏ ရဲ့ 15-20% ကို လျှော့ချဖို့ လိုအပ်နေဆဲလို့ ဆိုပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ အာဆင်နယ် က ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ တိုက်စစ်မှုး မာတီနက်ဇ် ကို ရောင်းချလိုက်မယ် ဆိုရင် လစာပေးချေမှုက တနှစ်မှ ယူရို 2.5 သန်းပဲ ရှိတာကြောင့် ၊ ထိရောက်မှုအား က နည်းလွန်းပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာ မီလန် ဟာ လူကာကူ ကို ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကာကူ ကို လစာ ပေးချေနေရတဲ့ ပမာဏ ဟာ မာတီနက်ဇ် ကို ပေးရတဲ့ ပမာဏထက်3ဆ ပိုများပြီး ၊ ပြောင်းရွှေ့ကြေး တန်ဖိုးကလဲ2ဆန် ကျော် အထိ ရရှိသွားခဲ့ ပါတယ်။
လက်ရှိ မှာတော့ အင်တာ မီလန် ဟာ လူကာကူ ရဲ့ နေရာကို အစားထိုးမယ့် တိုက်စစ်မှုး တဦးကို ရှာဖွေနေပြီး ၊ အတ္တလန္တာ က ဇာပါတာ ကို ချိတ်ဆက်သွားဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အတ္တလန္တာ ကလဲ ဇာပါတာ နေရာကို အစားထိုးဖို့ အတွက် ချဲဆိး တိုက်စစ်မှုးလေး အဗရာဟမ်ကို ပစ်မှတ်ထားနေပြီး ၊ နောက် 24 နာရီ အတွင်း အင်္ဂလန် ကို ရောက်ရှိလာကာ အပြောင်းရွှေ့ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေသွားဖွယ် ရှိနေပါတယ်။